Maxaa la gudboon Dowladda Soomaaliya muddada afarta sano ee soo socota? | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Maxaa la gudboon Dowladda Soomaaliya muddada afarta sano ee soo socota?
Muqdisho.(SONNA):- Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ahaa doorashadiisii koowaad madaxweynihii ugu horeeyay ee hoggaamiya dowladd aanan kumeel-gaar aheyn burburkii kadib.
Sidoo kale waxa uu ahaa madaxweyne muddo badan ku soo dhex jiray Bulshada maadaama uu ka soo shaqeeyay arrimaha Waxbarashada iyo Samafalka oo uu caan ku noqday ka hor siyaasaddiisa.
Kama hadli doonno afartii sano ee uu madaxweynaha ahaa Xasan 2012- 2017kii,ee waxa aan diiradda saari doonaa afartan cusub ee hadda loo doortay.
Madaxweyne Xasan waxa uu mar kale fursad u helay in uu dhamaystiro qabyo dhowr ah oo ka jirta nidaamka dowliga ah ee Soomaaliya. Sidii horey ba uu hal dhig uga dhigtay Madaxweynaha waxaa laga sugayaa in uu ka dhabeeyo oraahdiisii aheyd “Qabyo ninkeeda ayaa dhamaystira”ee uu ku tartamayay doorashadii hore ee 2017kii.
Haddaba qormadan waxaan ku falanqeyn doonaa lix qodob oo madaxweyne Xasan looga fadhiyo dhameystirkooda, kuwaa oo kala ah:-
1-Dhameystirka deyn cafinta Soomaaliya.
Xasan Sheekh waxa uu muddo xileedkiisii hore soo bilaabay Barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya,Waxa uu dunida u muujiyay daah-furnaanta Maaliyadeed ee dalka iyo in Soomaaliyada soo kabanaysa ay mudan tahay in laga cafiyo deymaha dunida looga leeyahay si dalku uu u helo Maalgelin caalami ah oo qeyb ka noqota soo kabashada dalka iyo horumarintiisa.
2-Shaqaaleynta dhalinyarada iyo aqoonyahanka.
Madaxweyne Xasan waxaa lagu xasuustaa in xilligiisii la qoray shaqaalihii ugu horeeyay ee mushaari noqda kuwaa oo ay yeellato dowladda Soomaaliya. Tirada shaqaalaha ayaa la gaarsiiyay illaa shan kun oo qof oo si joogta ah u hela mushaaraadkooda.
Hirgalinta yoolkaa ayaa ahaa mid adag oo dhabar adeyg badan u baahnaa madaama ay dowladdu aheyd mid cusub oo lagu maaraynayay dakhli aanan ku filneyn iyo deeqaha dowladaha saaxiibada la ah dalka.
Shantii sano ee la soo dhaafay ee uu Madaxweyne Xasan ka maqnaa hoggaanka dalka lama helin shaqaaleyn,taa oo xukuumadii jiray ay ku sababeysay in la sameynayay nidaaminta xisaabaha dalka,arintaa oo sare u qaaday shaqo la’aanta da’yarta sanad walba ka soo qalin jabinayay Jaamacahada dalka.
Madaxweynaha cusub waxaa looga fadhiya in dib uu u furo shaqaaleynta dhalinyarada iyo in la sameeyo shaqo abuur kala duwan oo magaalooyinka iyo maamul goboleedyadaba laga hirgaliyo si fursad ay u helaan dhalinta shantii sano ee tagtay rajo ka qabay in dalkooda ay ka dhex shaqeeyaan.
3-Dhameystirka Dastuurka dalka
Sagaalkii sano ee dalka ay kala hoggaaminayeen madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweyne Xasan waxa ay dhamaan dadka Soomaaliyeed ay rajeynayeen in la dhameystiro Dastuurka Qabyada ah ee dalka kaa oo in badan aanan kala saarin awooddaha hoggaanka,taa oo sabab u noqota khilaafyo soo noq-noqda iyo is qab-qabsi soo kala dhex gala Maamul goboleedyada iyo Dowladda Federaalka.
Haddaba Madaxweyne Xasan waxaa looga fadhiyaa in uu dhamaystiro Dastuurka si sharcigu u noqdo mid sareeya.
4-Dhamaystirka Hay’adaha Garsoorka Dalka.
Hay’adaha Garsoorka dalka waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu muhiimsan dowladnimada dal walba,Si loo helo garsoor loo wadda siman yahay waxaa loo baahan yahay dhameystirka Hay’adaha Garsoorka iyadoo loo Eegayo sida ay u kala sareeyaan iyo baahida deegaanadu u qabaan.
Garsoorka ayaa hadda intaa badan waxay ka dhisan yahay Caasimadda dalka iyo Maamul goboleedyada qaarkood,hoggaanka cusub waxaa laga sugayaa dhamaystirka dhisidda Hay’addo awood buuxda u leh u kala garniqida Bulshada iyo fulinta xukunkoodda.
5-Dabar goynta Argagixisada.
Hormarka iyo dib u dhiska la-tiigsanayo waxaa ragaadiyay oo caqabad ku ah falalka Argaggixisadu ay ka geystaan dalka,kaa oo ay ku bartilmaameed-sanayaan Haldoorka Soomaaliyeed,dhanka kalena cabsi gelin iyo burburin ku haya Ganacsiga iyo Ganacsatada dalka.
Madaxweyne tallada hayaa waxaa looga fadhiyaa ka xoreynta deeganadda haray Al-shabaab iyo Daacish oo muddo xileedkiisii hore laga gaaray guulo la taaban karo iyo in looga itaal badnaado dhamaan deegaanadda Miyiga ee ay ku dhumaaleystaan haradigooda.
6- Dib u heshiisiin dhab ah
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu dib u doorashadiisan hal ku dhig ka dhigtay”Soomaali heshiis ah,Dunidana la heshiis ah”kaa oo ay inta badan shacabka Soomaaliyeed aad ugu riyaaqeen.
Haddaba waxa ay Shacabku isweydiinayaan Madaxweynuhu ma dardar gelin doonaa dib u heshiisiinta gudaha dalka iyo wada shaqeynta dalalka muhiimka u ah Soomaaliya ee aan wadaagno dano badan si ay dhab ahaan loogu helo”Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah?”.
Qodobadaan waa kuwo muhiim u ah dowladnimada dalka,sidoo kalena waxa ay qeyb weyn ka qaadanayaan horumarka aan hiigsanayno iyo rajo abuurka Shacabka u hamuun qaba helidda dowlad awood leh oo dalka ka hirgasha.
W/Q: Mohamed Abdikadir Socdaal.
Previous articleSaraakiisha ciidamada amniga gobolka Mudug oo baadi goobaya kooxo hubeyan oo dil geystay
Next articleGuddoomiyaha Aqalka sare iyo safiirka Sacuudiga oo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga labada dal+Sawirro
Dhallinyarada Soomaaliyeed oo u dabbaaldegay xuska 15-ka May
Dahir Aadan Cali - May 15, 2022 0
Muqdisho.(SONNA):- Dal ka...
Maxaa laga bartay Shantii sano ee tagtay,maxaa se laga filan karaa Aqalka s...
Mohamed Abdukadir Socdaal - May 7, 2022 0
SONNA (MUQDISHO)- Guddoom...
Haweeney xaamilo ah oo meydkeeda laga soo saaray ceel ay ku dhacday Deegaa...
Abdiwali - February 23, 2022 0